Archive du 20180616
Mbola Rajaonah sy Jaona Elite Te ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mey ?
Mirodana tsikelikely ny fanjakana HVM, maro ireo mpiara-miasa na olona akaiky ny filoham-pirenena no efa tonga saina ary tsy te ho ratsy eo anoloan’ny fiaraha-monina sy ny firenena.
Praiminisitra Christian Ntsay Mifanolana amin’ny filoha sahady
Mandeha ny tsindry isan-karazany eo anatrehan’ny fitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian, izay tsy mahafa-po ny depioten’ny fanovana sy ny vahoaka mpitolona.
Christine Razanamahasoa Vonona hiresaka amin’ireo sendika
Nitondra fanazavana amin`ny laharampahamehana amin`izao governemanta vaovao izao ny depiote Christine Razanamahasoa, voatendry ho minisitry ny fananjariana ny tany sy ny raharahan-tany.
Antoko Tambatra “Tokony ho lohalaharana hitaky fanorenana ny sendika”
Hiraisanay amin’ny depiote 73, hoy ny filohan’ny antoko Tambatra, Pety Rakotoniaina, ny tsy fanekena izao fitondrana izao.
Fanonganana minisitra 14 Raikitra ny fanangonan-tsonia
Nandefa taratasy fangataham-panazavana any amin’ny praiminisitra Christian Ntsay momba ny fampiharana ny didin’ny HCC, ary maniry ny hihaona aminy ny depioten’ny fanovana.
Hanitra Razafimanantsoa Nisongadina tao anatin’ny tolona
Namoaka mpitarika na “leader politique” tena nisongadina ny tolona ho an’ny fanovana, ary niavaka tanteraka depiote Hanitra Razafimanantsoa, avy amin’ny Antoko Tiako I Madagasikara.
Kandida heverina ho madinika Mety hivondrona tampoka
Raha variana amin’ny fizarana seza sy fifamindram-pahefana etsy sy eroa ireo heverina ho antoko lehibe eto amin’ny firenena dia mandeha ny feo fa mba manomboka manao pi-maso amin’ny sehatra iraisampirenena ihany koa ireo antoko heverina ho madinika omban’ireo mety ho kandidany.
Ravalomanana sy ny TIM Manana tombondahiny kokoa
Mety ho samy nanana ny nampiavaka azy ny antoko tsirairay, saingy tsy takona hafenina kosa fa mafy sy mbola mahery ny TIM mitaha amin’ny hafa, ary hahafaha-mitaratra izany ny tolon’ny 13 mey.
Fitsinjaram-pahefana, fampandrosoana ifotony Manamafy ny tohana ara-bola omeny ry zareo Alema
Nivoitra io omaly nandritra ny fitsidihana ara-pomba fifanajana nataon’ny ambasadaoro alemana miasa sy monina eto Madagasikara Harald Gerhig, tamin’ny minisitry ny Atitany sy fitsinjaram-pahefana vaovao Razafimahefa Tianarivelo tetsy Anosy.
Basikety Malagasy Ho fararanon-dalao ny anio
Ho fararanon-dalao basikety baolina eto amintsika amin’ity faran’ny herinandro ity.
Oay ! Tena vokatry ny fonao indray ry Jean iny tomany nivoaka omaly iny sa sanatria ranomasom-boay indray a?
Asa fivarotana vy Lasa bizina tena mandeha be
Lasa bizina be tena mandeha eto an-drenivohitra amin’izao ny varotra vy. Anisan’ny toerana tena ahitana azy ity ny etsy La Réunion kely Ampefiloha.
Fahasimban’ny tontolo iainana Ahiana ho tratry ny tany efitra avokoa manerana ny Nosy
Mahatratra 14 000 Ha ny tany efitra manerana an`i Madagasikara amin`izao fotoana ka ahiana ho tratry ny tany efitra avokoa manerana ny Nosy vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana.
NODIMANDRY I JOE MIANDRISOA
Misaona ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety satria dia nodimandy halina teny amin’ny Hopitaly Beefelatanana i Joe Miandrisoa ,
Mondial 2018 Nifampitady i Portugal sy Espagne
Ratsy fanombohana avokoa ireo solontenan’i Afrika 2 voalohany ao amin’ny vondrona A sy B miatrika ny Mondial 2018 any Rosia.
Ireo kianja handray ny Mondial 2018 (tohiny)
Ny kianja faha-12 farany handray ny Mondial any Rosia no hatolotra anao eto amin’ity pejy ity anio .
Telma coupe de Madagascar 2018 Anio sabotsy sy rahampitso alahady ny 1/32-ndalana
Ankoatra ireo lalao 4 ho tontosaina any amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga (Kintan’i Boeny # Asmj Sofia ; Cnaps Sport Itasy # Kintan’i Boeny Boeny) sy ny kianja sentetikan’i Carion (Five Fc A/manga #As Fanalamanga A/Mangoro ;
Edito Hizaha tapa-porohana
Inona ihany izany no hatao ? Samy manao izay ho afany hankalazana ny azy avy ireo milaza fa tokony ho laharam-pahamehana ny fifidianana, an-daniny sy ny mpomba ny maha laharam-pahamehana ny fanorenana ifotony an-kilany.
SEKOLY AMBONY UPRIM Lasa oniversite nomerika
Tapitra hatreo ny fampiasana taratasy eo anivon’ny sekoly ambony Université Privée de Madagascar na ny UPRIM. Tsy hisy hilahatra intsony ihany koa ny mpianatra rehefa mandoa saram-pianarana fa amin’ny alalan’ny karatra dia vita.
Lisea Rabemananjara Toamasina Nitokona sy nidina an-dalambe ireo mpianatra
“Lycée en Grève”, no sorabaventy netin’ireo mpianatra nitety tanàna omaly maraina, nilazan’izy ireo ny heviny sy ny fitakiany ny mba hiverenan’ny fampianarana azy ireo amin’izay,
Fetin’ny aterineto Nomena lanja ny marika Malagasy
Nankalazaina tetsy amin’ny Akademia malagasy etsy Tsimbazaza omaly ny « Madagascar Internet Day » na ny andro natokana ho an’ny aterineto, izany hoe fetin’ny aterineto eto Madagasikara.
Fakana an-keriny ireo teratany Frantsay Voaresaka manokana teny Mahazoarivo
Nitsidika tamim-pomba fifanajana ny praiminisitra Ntsay Christian, ny Ambasadaoro Frantsay miasa eto Madagasikara Véronique Vouland-Aneini,
Samy maty ny mpamilin’ny kamiao mpitondra entana izay nifanena teo Ampasimadinika- Manombolo, 50 km tsy hidirana an’i Toamasina.
Vidin-tsolika Nisondrotra ary mbola hisondrotra
Tampoka ho an`ireo mpitondra fiara ny fisondrotry ny vidin-tsolika teny amin`ireo tobim-pamatsiana ny alin`ny alarobia hifoha alakamisy. Nahatratra 50Ar ny fisondrotany.
Mpivarotra eto Antananarivo sy ny manodidina Efa tafakatra an’aliny
Afaka fotoana fohy dia ho lasa mpivarotra avokoa ny antsasaky ny fianakaviana Malagasy.
“Alliance vanille” Hery iraisan’ny kaompania ana habakabaky ny Oseana Indiana
Ny “Alliance Vanille” dia niforona tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny 21 septambra 2015 izay ivondronan’ny kaompania Air Austral, Air Madagascar, Air Mauritius ary Air Seychelles. Mikendry ny fanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny firenena misy azy avy ary miezaka ny hametraka ireo rafitra matanjaka eo amin'ireo kaompania ireo. Nisy ny fivoriana omaly zoma 15 jona 2018 tany Maorisy notanterahan’ireo mpitantana an’ireo kaompania ireo ho fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa eo anivon’io “Alliance vanille io”.